Falastiin oo safaarad cusub ka furatay Vatican-ka (Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Falastiin oo safaarad cusub ka furatay Vatican-ka (Daawo Sawirada)
Maamulka Falastiin, ayaa Sabtidii safaarad ka furtay Xarunta Vatican-ka, ka dib kulan ay ku yeesheen Madaxweynaha Falastiin, Mahmoud Abbas iyo Pope Francis, Baadariga Mad-habta Catholic-gada (Diinta Masiixiga).
Madaxweynaha Falastiin, ayaa waxaa uu si diiran uu u soo dhaweeyay furitaanka safaaradan cusub, isagoona sheegay in dadkiisu ku faraxsan yihiin in safaarad ku yeeshaan Vatican-ka.
Madaxweynaha, ayaa waxaa uu Baadariga uu ku ammaanay mid jecel shacabka Falastiin iyo nabadda. Tallaabadan waxaa uu ku macneeyay mid ka turjumeyso rabitaanka uu u haayo bulshada reer Falastiin.
Madaxweyne Abbas oo hadlaayay ka dib furitaanka safaaradda, ayaa sheegay in Baadarigu uu kala hadlay walaaciisa ku aadan, qorshaha uu Donald Trump ku doonayo in safaaradda Mareykanka ee Tel Aviv uu ugu soo wareejiyo Magaalada Qudus.
Dhawr sano ka hor, ayaa la ogolaaday in Falastiin safaarad ka furato Vatican-ka, ka dib markii Pope Fransis uu si rasmi ah uu ugu aqoonsaday dal madax bannaan.
Baadari Francis, ayaa marar badan soo jeediyay in dib loo soo noolleeyo wada hadaladii Falastiin iyo Israel, si loo helo nabad dhex marta labada dhinac.
Pope Francis is presented with a gift by Palestinian President Mahmoud Abbas during a private audience at the Vatican, Saturday, Jan. 14, 2017. (Giuseppe Lami/ANSA pool via AP)
Diyaarad laga leeyahay dalka Turkiga oo ku burburtay dalka Kyrgyzstan (Sawiro)
Ururka Daacish oo laga qabsaday Jaamacadda Magaalada Mosul (Daawo Sawirada)